Qarax xoogan oo ka dhacay Malmö | Somaliska
Qarax xoogan ayaa saaga aroortii ka dhacay xaafada Rosengård ee magaalada Malmö. Qaraxaan ayaa lala eegtay dukaanka laga adeegto ayadoo qaraxu uu waxyeeleeyay ilaa dabaqada 3aad ee dhismaha. Booliska ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa la dhigay banaanka dukaanka la qarxiyay. Ilaahada lama garanayo cida ka dambeysay qaraxaas iyo sababta bartilmaameedka looga dhigtay dukaanka. Cidna wax kuma gaarin qaraxa balse qasaare dhaqaale ayuu gaystay ayadoo xitaa guryaha u dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ay waxyeeloobeen. Magaalada Malmö ayaa ah goob ay qaraxyo badan ka dheceen iyo weeraro lagu bartilmaameedsanayay dadka soo galootiga ah.
Qarax xoogan ayaa saaga aroortii ka dhacay xaafada Rosengård ee magaalada Malmö. Qaraxaan ayaa lala eegtay dukaanka laga adeegto ayadoo qaraxu uu waxyeeleeyay ilaa dabaqada 3aad ee dhismaha.
Booliska ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa la dhigay banaanka dukaanka la qarxiyay.
Ilaahada lama garanayo cida ka dambeysay qaraxaas iyo sababta bartilmaameedka looga dhigtay dukaanka. Cidna wax kuma gaarin qaraxa balse qasaare dhaqaale ayuu gaystay ayadoo xitaa guryaha u dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ay waxyeeloobeen.
Magaalada Malmö ayaa ah goob ay qaraxyo badan ka dheceen iyo weeraro lagu bartilmaameedsanayay dadka soo galootiga ah.